Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - ကလေးတွေကအဘို့အရှေ့မီးကလေးများမွေးနေ့လက်ဆောင်များ RC Car ဖြင့် 2.4GHz High Speed ​​ရော့ခ် crawler ယာဉ် - RC ကားကလေးများ KOOWHEEL Remote Control ကိုကားများအတွက် 360 Rotate 4WD ဟာ Off လမ်းမကြီးနှစ်ချက် Rotate လိမ့်ကျခြင်းဘက်
ကလေးတွေကအဘို့အရှေ့မီးကလေးများမွေးနေ့လက်ဆောင်များ RC Car ဖြင့် 2.4GHz High Speed ​​ရော့ခ် crawler ယာဉ် - RC ကားကလေးများ KOOWHEEL Remote Control ကိုကားများအတွက် 360 Rotate 4WD ဟာ Off လမ်းမကြီးနှစ်ချက် Rotate လိမ့်ကျခြင်းဘက်
1.High အမြန်နှုန်းနှင့်လမ်းပိတ်ထား: အဆိုပါကားတစ်စီး 4WD နှစ်ခုအစွမ်းထက်မော်တာရှိပြီး၎င်း၏မြန်နှုန်းမြင့်အာမခံပါသည်။ အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘီးတစ်ခုကိုအမြန်အလှည့်စေရန်လွယ်ကူသည်။
ကလေးတွေအဘို့အ 2.Best ဆုကြေးဇူးကို: 2.4GHz ရေဒီယိုအဝေးထိန်းစနစ်ကနှင့်တကွ, RC ကားတစ်စီးသားသမီးတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံမွေးနေ့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များဖြစ်ပါတယ်။
လှည့်ကွက်များ 3.All အမျိုးမျိုး: သင်၏ကလေးတွေကိုသို့မဟုတ်ကစားစရာမော်တော်ကား Lover များအတွက်သင့်လျော်သောအံ့သြဖွယ် 360 ဒီဂရီတန့် Flip ဒီဇိုင်း။ နှစ်ချက်နှစ်ဖက်, ညာလှည့်, left ကိုဖွင့်, နောက်သို့ဆုတ်, ရှေ့ဆက်, 360 ဒီဂရီလိမ့်ကျခြင်း Flip running ။ rc ကားတစ်စီးရုံမျှမကိစ္စကြောင့်တာမျိုးသောအရာကိုမယ့်အပေါ်စောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်ပါကနိုင်ပုံကို, သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအေးမြအတွေ့အကြုံကိုပေး!
4.High အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း: အရည်အသွေးမြင့်ပလပ်စတစ်, မြဲမြံစွာနှင့်အကြမ်းခံကားတစ်စီးခန္ဓာကိုယ်ပိုမိုကြမ်းတမ်းနှင့် crashworthiness ။ အဆိုပါတာယာ, ရာဘာကိုမဆိုပြင်ပအခွအေနေကိုကျော်လွှားရန်လွယ်ကူသောလုပ်နေကြသည်။
5.Guarantee: ကား 15, USB ကြိုး (ပါဝင်သည်) နဲ့ 3.7V 400mAh အားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကို (ထည့်သွင်း) ကိုအသုံးပြုသည် - အချိန်,2နာရီကြာကစား 20 မိနစ်အချိန်အားသွင်း။ KOOWHEEL အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေပေးသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအမိန့်အသစ်တဦးတည်းဖလှယ်။ ယခုလှည်း add hours.So 24 တုံ့ပြန်မှုဖို့အဆင်သင့်!
ယခင်: လူကြီးများနှင့်ကလေးများ2Rechargeable ဘက်ထရီ 2.4GHz ရေဒီယို Remote Control ကို Truck ကား Monster အမြင့်မြန်နှုန်း crawler က USB အားသွင်းကိရိယာ RC ကား (အပြာရောင်) နဲ့ RC ကား KOOWHEEL 1:16 စကေး 2WD ဟာ Off လမ်းမကြီး Remote Control ကိုကား
ကုန်ပစ္စည်း ID ကို (UPC): 6958210300936
2.4 GHz အမြန်နှုန်းရေဒီယိုထိန်းချုပ်: ခိုင်မာတဲ့ Anti-ဝင်ရောက်စွက်ဖက်, တူညီတဲ့အချိန်နှင့်နေရာမှာအတူတူပြိုင်ကားဖို့မျိုးစုံကားများကို enable ရာ။ သငျသညျ2ပိုပြီး KOOWHEEL rc ထရပ်ကားရဆိုပါကဘေးထွက်အားဖြင့်များစွာသောကားများဘက်ကို run ဖို့ပိုပြီးပျော်စရာပါပဲ။
ရှေ့ဆက် / ညာဘက် / လက်ဝဲ / ပြောင်းပြန်အပြည့်အဝ function ကိုထိန်းချုပ်။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကားအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်စတီယာရင်နဲ့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာရှိပြီး, အ Ergonomics ဝေးလံခေါင်သီအစပြုသူများအတွက်သာလွန်ထိန်းချုပ်မှုသေချာနိုင်ဘူး။
ဘက်ထရီ၏အတို-မောင်းနှင်မှုအချိန်အောက်တွင်3အကြောင်းပြချက်: အဆိုပါအားသွင်းအချိန်ဟာပွဲစဉ်ကိုထောကျပံ့ဖို့သိပ်တိုတောင်းပါတယ်။
သငျသညျအားသွင်းခြင်းမပြုမီဘက်ထရီထဲက run ခဲ့ပါဘူး။
RC ကားတစ်စီး x1
Remote Control ကို x1
ကား x2 အဘို့အ Rechargeable 6.4V / 700mAh ဘက်ထရီ
ကို USB အားသွင်း x1
HD ကို 720p FPV ကင်မရာ
ဘက်ထရီဘဝကို: အကြောင်းကို 15mins
ထိန်းချုပ်ရေးအဝေးသင်: ပေ 100
မြန်နှုန်း: 15 ကီလိုမီတာ / H ကို
မော်တော်ကားဘက်ထရီ: 3.6V 600mA ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီအဝေးမှထိန်းချုပ်:2* 1.5V AA ကိုဘက်ထရီ ( ) မပါဝင်
Functions များ: နောက်ကျော, ညာလှည့်, left, ရှေ့ turn
က x 11 x ကို 3.9 16.1 လက်မ: Package ကိုအရွယ်အစား
Net ကအလေးချိန်: 1.1 ပေါင်